Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filimkii Hrithik Roshan Dunida Ku Qabsaday Kaho Naa… Pyaar Hai – Filimside.net
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filimkii Hrithik Roshan Dunida Ku Qabsaday Kaho Naa… Pyaar Hai
January 14, 2019 Ali Aadan
Taariikhda: January 14, 2019
Kaho Naa… Pyaar Hai waa filim Hindi ah ee soo baxay sanadii 2000 sidoo kalena jaceyl iyo action isku jiro waana filimkii Hrithik Roshan lagu soo caan bixiyay.
Filimkan Rakesh Roshan sameeyay wuxuu noqday Blockbuster weyn sidoo kalena waa filimkii lacagaha ugu badan soo xareeyay ee Bollywood-ka sameeyeen sanadii 2000 kana caawiyay inuu Hrithik Roshan inuu mudo 14-cisho ah Super Star ku noqdo!
Jilaayaasha filimkaan: Hrithik Roshan iyo Ameesha Patel.
Director & Producer: Rakesh Roshan
Hadaba maanta waxaan idiin heynaa xaqiiqooyin u gaar ah filimka Kaho Naa… Pyaar Hai fadlan hoos kaga bogo:
Xaqiiqada 1-aad: Filimkan waxaa lagu daray buuga diiwaanka iskoorada aduunka lagu qoro (Guiness Book of World Records) sanadii 2002 madaama lagu aruursaday bilado gaarayo 102-biladood.
Xaqiiqada 2-aad: Hrithik Roshan marka ugu horeyso ee uu la kulmaayo Ameesha Patel filimkaan waxay isku arkayaan wadada dhexdeeda xili samaafaraha ay sugayaan, waa dhacdo si rasmi ah loo soo xigtay qaabkii Hrithik Roshan uu kula kulmay markii kowaad Susanne Khan oo xaaskiisa ahayd intii u dhaxeesay 2000 ilaa 2014.
Xaqiiqada 3-aad: Hrithik Roshan wuxuu leeyahay 6-farood weliba gacantiisa midig ayuu ku leeyahay, marka uu doorka Raj matalaayo wuxuu isku dayay inuu qariyo asigoo gacmaha Gloves gashanaayo muuqaal sidoo kalena doorkiisa wuxuu iska dhigayaa nin guran ama gacanta bidix adeegsado.
Xaqiiqada 3-aad: Hrithik Roshan doorkiisa Raj atirishada hooyada u mataleyso Asha Patel waa Ameesha Patel hooyada sida dhabta ah u dhashay.
Xaqiiqada 4-aad: Maal mihii ugu horeesay duubista filimkaan waxaa la sheegay in Hrithik Roshan aad uga xishooday sida Dance-ga loo sameeyo laakiin gabadha sameynta Dance-ga looga haray Farah Khan ayaa dhiiri galisay kana dhigtay geesi isku kalsoon, ilaa maantadana Hrithik marwalbo Farah Khan wuu sharfaa.
Xaqiiqada 5-aad: Director Rakesh Roshan sheekada filimkaan wuxuu qoray asigoo rabay inu Shah Rukh Khan atoore kaga dhigo laakiin markii dambe wey la xumaatay in SRK uu hogaamiye kaga dhigo filim door ahaan u baahan wiil dhalinyar oo fanka ku cusub sidaas ayuuna wiilkiisa Hrithik hogaamiye kaga dhigay Kaho Naa… Pyaar Hai.
Xaqiiqada 6-aad: Doorka Sonia ee Ameesha Patel mataleyso markii hore Kareena Kapoor inay sameyso ayuu qorshaha ahaa, Kareena markii ay maal maha hore sawirada filimkaan sameesay ayay si la yaab leh isaga baxday!
Waxaana sabab u ahayd ka bixitaanka Kareena filimkaan hooyadeed Babita oo ay Director Rakesh Roshan arimo badan isku maan dhaafeen.
Xaqiiqada 7-aad: Sidoo kale doorka Sonia waxaa la sheegay in Aishwarya Rai loo bandhigay laakiin ay iska diiday ayadoo cabsi ka muujisay la shaqeynta atoore fanka ku cusbaa xiligaas.
Xaqiiqada 8-aad: Hrithik Roshan markii uu aabihiis u sheegay inuu labo door ama labo waji ku matalaayo filimka Kaho Naa… Pyaar Hai, wuxuu taleefon ka wacay Salman Khan si uu caawinaad u weydiisto.
Laakiin Salman Khan marka hore wuu fahmi waayay qofka la hadlaayo kadib Hrithik ayaa ku yiri “Walaal Salman qofka kula hadlaayo waa Rakesh Roshan wiilkiisa Hrithik Roshan ee Director caawiye ka ahaa filimkaagii Karan Arjun!”
Markaas ayuu Salman fahmay kadibna siiyay Hrithik Roshan talo walbo oo ku aadan sida labo door loo matalo, sidoo kalena tabbabar gaar ah ayuu siiyay oo ku aadan jirdhiska, wuuna kaga mahad celiyay Hrithik taladii uu dhanka Salman ka helay,
Xaqiiqada 9-aad: Ameesha Patel codkeeda filimkaan si toos ah uguma hadleyn waxaa u codeesay gabbar xirfadeeda tahay inay filimada codeyso, madaama Ameesha qal qal ka muujisay qeybta codeynta.
Xaqiiqada 10-aad: Kaho Naa… Pyaar Hai waxaa la rabay qaybo ka mid ah lagu duubo jasiisara Fiji laakiin Rakesh Roshan waxaa kasoo daahay ogolaanshaha isaga iyo kooxdiisa halkaas ku aadi lahaayeen waxaana jadwalkaas loo badalay dalka New Zealand.
Xaqiiqada 11-aad: Kadib markii Kaho Naa… Pyaar Hai la daawaday 14-kii Janaayo 2000, dalka New Zealand caan ayuu ka noqday, waxaana halkaas u safreen dalxiisayaal badan oo Hindi ah.
Taasi waxay sababtay in la waayo dal ku galka iyo dalabaadka adeegyada labada wadan Hindiya iyo New Zealand madaama dad xadka baxsan soo codsadeen inay New Zealand dalxiis ku tagaan.
Waxaa la sheegay xafiiska Viisaha lagu bixiyo ee New Zealand leedahay lagu balaariyay aduun lacageed oo gaarayo $500,000 madaama ardayadii iyo dhalinta oo dhan soo dalbadeen inay New Zealand dalxiis u aadaan.
Masuuliyiinta socdaalka Hindiya iyo New Zealand qaabilsan waxay sarafadaan iyo dalabaadka waalida ku tilmaameen inuu Hrithik Roshan sabab u ahaa “Hrithik factor.”
Xaqiiqada 12-aad: Filimkaan wuxuu u suura galiyay Hrithik Roshan inuu noqdo atooraha ugu horeeyay ilaa hadaan darajadaas heesto ee hal sano isku qaato abaal marinta atooraha ugu wanaagsan iyo atooraha Bollywood-ka ku cusub midka ugu wanaagsan ee shirkada Filmfare bixiso (Filmfare Award for Best Debut & Filmfare Award for Best Actor).
Xaqiiqada 13-aad: Waxaa la duubayay labo dhamaad ama uultimo ee filimka Kaho Naa… Pyaar Ha leeyahay, mid wuxuu yahay in dhamaadka filimka la dilaayo Raj, midka kalena wuxuu yahay in Raj iyo Sonia ay is calfanayaan.
Markii tiyaatarada la saari rabay filimkaan Rakesh Roshan iyo wiilkiisa waxay doorteen muuqaalka in filimka Kaho Naa… Pyaar Ha farxad ku dhamaado oo ah in muuqaalka Raj iyo Sonia oo is calfanaayo filimka lagu soo gaba gabeeyo.
Waad Ku Mahad Santahay Aqriskaaga
Waxaa Aqrisay 77
Birthday Girl : Waa Kee Filimka Aad Ugu Jeceshahay Kangana Ranaut Aflaamteeda March 23, 2019
6 Xaqiiqo U Gaar Oo Aan Ka Aqoon Atariishada Muranka U Saaxiibka Ah Kangana Ranaut March 23, 2019
Goorma La Daawan Doono Goos-gooska Filimka Ugu Weyn Sanadkan 2019 Ee Bharat March 23, 2019
Barnaamijka Raad Raac: Maanta Bollywood-ka aqbaaraadkooda maxaa ugu hadal heyn badan (+Sawiro) March 23, 2019
Aktarka Vicky Kaushal oo aqbalay sameynta mashruuc ay iska diidayn aktarada Shah Rukh Khan iyo Amir Khan March 23, 2019
Noon Update: Duhurkan iyo filimka Kesari halka uu maraayo maalintiisa 3-aad tiyaatarada uu saaran yahay March 23, 2019
Kaartooyin Badan OO laga Soo Bandhigay Filimka Tashkent Files Kaaso U Gaar Ah Hogaamiyaasha Filimkan ( Sawiro March 23, 2019